Friday September 14, 2018 - 03:44:10 in Wararka by Super Admin
11- Baanka Horumarinta Africa oo loo soo gaabiyo ( AFDB) ayaa isna biyo gelinta JSL ku bixiyey lacag dhan $ 8.5 Million dollar. Total ka lacagtaas kor ku taxan ayaa noqonaysa $165 Million oo Dollar taas oo looqoondeeyey in ay soo af jarto lacagtaasi Qorshe hawleedyadii horumarinta biyaha Somaliland ee 5-ta sanadood (2012-2016 ) Waxaana Mashaariicdan mar kasta laga fuudhyeelaayey dib u habeynta iyo fidinta biyaha Caasimada Hargeisa iyo nawaaxigeeda oo ilaa iyo maanta biyo la'aan badani ka jirto taa soo ay shacabka reer Hargeisa is weydiinayaa meesha ay martay lacagtaa Malaayinka Dollar ka ahi iyo cidii lunsatay?
2- Lay'e mashuuca 2aad oo isna Hargeisa Gudaheeda ka socda waxaa lacag gaadhaysa 23,500,000 Million oo Euro ku bixiyey Banka Horumarinta Dawlada Jarmalka waxaana shaqada mashuruucan gancanta ku haya shirkad Jarmal oo la yidhaahdoCES? Hadaba su'aashu waxay tahay xaguu marayaa mashruucaasi? oo isna mudadiisii dhaafay ? Goorma ayaa Hargeysi biyo ka helaysaa ?
3- Kuy'e Shirkada Coca Cola international waxay iyana ku deeqday biyo balaadhinta lacag dhan $5 Millionoo dollar waxaana ay gacanta u gelisay shirkad Talyaani ah oo la yidhaaTS shirkadaa oo magaalada dhexdeeda kawada taangiyo dhaadheer? ilaa iyo maanta ummadda uma cada meesha ay howshaasi marayso iyo goobta iyo goorta ay biyo ka heli doonaan reer Hargeysa.
Guntii iyo Gebo gebadii qormadan: Anigu daaha kama rogin ee dadkuba wuu arkaayaa ! Shacaboow tiraa kaa gedmane wax isu geygeyso -Mashruucan baaxada leh ee musuqa badan dugsanayaa hawshiisu waxay u taalaa xukuumada talada haysa ,gaar ahaan Hanti dhowrka guud ee qaranku in uu baadhis dhameystiran geliyo oo uu hawshiisa dastuuriga ah ka guto.